Kooxihii Diyaarinayay BSC ga Oo Shahaado Sharaf La Gudoonsiiyay - Cakaara News
Kooxihii Diyaarinayay BSC ga Oo Shahaado Sharaf La Gudoonsiiyay
Jigjiga( cakaaranews )Arbaco 13ka April 2016, Kadib markii xubno khabiiro ah oo katirsan 34 xafiis oo kamida xafiisyada DDSI loo xareeyay diyaarinta iyo dib u cusboonaysiinta documentiyadii Barnaamijka Halbeega waxqabadka iskudheelitiran ee (BSC) islamarkaana ay ku xaraysnaayaan mudo 15 maalmood kuliyada maaraynta iyo adeega shacabka DDSI kuna jireen diyaarinta iyo ka doodida barnaamijka BSC kaasoo ah aalad lagu cabirayo waxqabadka faaiido badana kagaysanaya qanaca macaamiisha ayaa maanta kooxihii diyaarinayay ay warbixintiisa ku soo jeediyeen Hoolka shirarka ee qaryan dhoodaan.
Shirkan oo uu soo agaasimay xafiiska Adeega Shacabka iyo Horumarinta Cududa Shaqaalaha ayaa waxaa ka soo qaybgalay qaar kamida wasiirada xafiisyada iyo waliba dhamaan agaasimada xafiisada kaladuwan ee DDSI.
Hadaba shirkan ayaa waxaa ugu horayn furay Wasiirka Xafiiska Adeega Shacabka iyo Horumarinta Cududa shaqaalaha DDSI Marwo Maajida Maxamed Maxamuud oo ugu horayn u mahadcelisay kasoo qaybgalayaasha sida fiican ee ay uga sooqybgaleen shirka. Waxayna sheegtay wasiiradu in xafiisku uu u taaganyahay markasta hirglinta iyo ka midho dhalinta sidii loo tayayn lahaa nidaamyda adeeg bixinta oo ay hormuud u yihiin hirgalinta barnaamijyada dib u habaynta shaqada sida Ciianka Horumar, BPR, iyo waliba Barnaamijka BSC oo ah barnaamij muhiim u ah dhanka shaqada adeeg bixinta islamarkaana door muhiima ka gaysanaya qanaca bulshada.
Sidookale wasiirada ayaa xustay in 15 kii cisho ee u danbaysay ay diyaarinta iyo ka doodida documentiyada ay kujireen khabiiro laga soo kala xulay 34 xafiis islamarkaana si wanaagsan ay u soo dhamaystireen aadna ay ugu mahadcelinayso. Waxayna carabka kudhufatay in shahaado sharafna lagudoonsiinayo xubnihii doorka kaciyaaray.
Dhinaca kale, wasiirada ayaa ku soo dhawaysay Gudoomiyiha Kooxdii Diyaarinta iyo Isku-dubaridka Barnaamijka BSC mudane Maxamuud Cabdi Maxamed si uu u soo jeediyo waxqabadkii kooxihii diyaarinayay iyo waliba faa’iidooyinka uu u leeyahay barnaamijka guud ahaan deegaanka. Wuxuuna sheegay in xafiiska adeega shacabka iyo Horumarinta cududa shaqaalaha iyo waliba kuliyada maaraynta iyo adeega shacabku ay dadaal balaadhan ka gaysteen in kooxuhu ay soo gabagabeeyaan diyaarintii iyo dib u habayntii daraasaadyadii barnaamijka BSC. Sidookale wuxuu siqodo dheer uga hadlay muhiimada iyo faaiidooyinka Barnaamijka Halbeega Waxqabadka isu dheelitiran. wuxuuna carabka ku adkeeyay in deegaanka uu faaiido balaadhan u yeelan doono kadib markay ansixiyaan kabinetka deegaanku.
Ugudanbayna waxaa shahaadooyin abaal-marin ah la gudoonsiiyay qaar kamid ah xubnihii dadaalka ka muujiyay diyaarinta iyo habaynta barnaamijka BSC iyo maareeyaha kuliyada maaraynta iyo adeega shacabka DDSI